पवित्रा प्रकरणः सहजै र सस्तोमा पाइने एसिड धेरै युवतीको जीवनका लागि महंगो बन्दै – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/पवित्रा प्रकरणः सहजै र सस्तोमा पाइने एसिड धेरै युवतीको जीवनका लागि महंगो बन्दै
काठमाडौं, ९ साउन । नेपालमा एसिड आतंक रोकिने कुनै छाँट देखिएको छैन । धेरै युवतीहरुको खुसी र हाँसो खोस्दै आएको एसिड प्रकरणको बारेमा बहस राष्ट्रिय स्तरमा नै भए तर बजारमा सहजै र सस्तोमा पाइने एसिड धेरै युवतीको जीवनमा महंगो बनेर पेश हुँदै आएको छ ।
बिहीबार राति काठमाडौंमा पुनः यही काण्ड दोहोरियो । पीडित युवती अस्पतालमा पीडाको पोखरीमा पौडिदै गर्दा धेरै युवतीहरुको होसहवास फेरि एकपटक उडेको छ ।
एक्लै घरबाट निस्कनु दुर्भाग्य
ओखलढुंगाकी २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीलाई रौतहटका मोहम्मद आलमले हिजो बिहीबार एसिड एसिड प्रहार गरे । बाफल बस्दै आएकी पवित्रा दही चिउरा लिनको लागि चोकमा निस्किएकी थिइन् । बेलुका खाना खान मन नभएको बरु दही चिउरा खाउ भन्दै पवित्रा भक्तपरे जुःजु धौँ लिन गएकी थिइन् ।
पवित्राले दिदी सुनिता थापालाई पनि जाँउ भनेकी थिइन् तर दिदीले घरमा साना बच्चा भएको र साँझको समय जादिँन भनेपछि पवित्रा एक्लै निस्किएकी थिईन् ।
पवित्राप्रति आलमको आकर्षणले निम्त्याएको काण्ड
घरबाट दही चिउरा लिन हिडेकी पवित्रालाई बिच बाटोमा पुगेपछि आलमले फोन गरेको हुन सक्ने उनकी साँइली दिदी सुनिताको अनुमान छ ।
दही किनेर आउने क्रममा आलमले पवित्रालाई तल्लो चोकसम्म बाइकमा छाडिदिएका थिए । सोही चोकबाट आउने क्रममा पवित्राको घर नजिकै एउटा केटा तलतिर फर्किएर उभिएर बसेको पवित्राले देखेकी थिइन्, जस्ले नै पवित्रामाथि एसिड प्रहार गरेका थिए । किन याे मान्छे यसरी बसेकाे हाेला भन्ने साेच्दै आफ्नो कोठा तिर लम्किरहेकी पवित्रालाई तिनै युवकले तेजाव प्रहार गरे ।
हातमा दही बोकेकी पवित्रा, अनुहारको दाहिने भागमा परेको एसिडले छटपटाउदैँ कोठा तिर दौडिएकी थिइन् । जस्को पीडा सहन नसकेर ‘दिदी पोल्यो पोल्यो..’ भन्दै कोठामा दौडिएकी पवित्राले कोठामा दिदीलाई नदेखेपनि छिमेकी दिदीको सहारा लिईन् र प्रहरीलाई खबर गरे ।
पवित्राको दिदीपनि दिनभर घरमा थिइन्, बेलुकाको समय बच्चाहरुलाई कोठामा राखेर उनी हावा खान भन्दै बाहिर निस्किइन्, सोही समयमा नै पवित्रालाई आलमले एसिड प्रहार गरेका थिए ।
‘व्याग कम्पनी’ र युवतीहरुमाथि आलमको कुदृष्टि
केही वर्ष अघिदेखि पवित्राकी जेठी दिदी डल्लुस्थित आलमको ब्याग कम्पनीमा काम गरिरहेकी थिइन्। जेठी दिदीले पवित्रा र साँइली दिदीलाई पनि सोही कम्पनीमा काम लगाएकी थिइन् । साँइली दिदीले केही समय काम गरे पनि पवित्राले भने सो कम्पनीमा १४ दिन मात्र काम गरिन् ।
१४ दिन काम गरेपनि पवित्राले सो कम्पनीमा काम गर्न मन नभएको भन्दै छाडिन् । आलमले साँइली दिदीसंग तलबको विषयमा कुरा गर्छु भन्दै पवित्राको फोन नम्बर मागे । उनले कसैको नम्बर कसैलाई दिन नसक्ने भनेपनि लामो समयदेखि आफ्नो कम्पनीमा काम गर्दै गरेकी उनकी जेठी दिदीसंग नम्बर मागे र उनीबाट फोन नम्बर पाए ।
फेसबुकमा आउने गरेका अनौठा सन्देश
उक्त कम्पनीमा काम गर्दा आलमसँग उनको सामान्य चिनजान भयो। राम्रो जागिर पाएपछि भने गार्मेन्टको काम छाडिन् । पवित्राले आलमलाई दाइ भन्थिन्। पवित्रालाई उनले बहिनीको रुपमा मात्र हेरेका रहेनछन्, जब आलमले कार्कीलाई फेसबुकमा अनौठा सन्देश पठाउन थाले ।
बिहीबार पनि दही चिउरा किन्न जाने क्रममा बाटोमा पवित्राले आलमलाई देखिन् । हिड्दै किन जानु म पु¥याइदिन्छु भनेपछि मोटरसाइकल चढेर उनीहरू डेरीमा पुगे । नजिकैको अर्को पसलमा चिउरा पनि किने। उनीहरूले सँगै खाजा खाए।
केही बेरअघि ‘एक्लै कहाँ जान्छौ, म पु¥याइदिन्छु’ भनेका आलमले घर नजिकैको चोकसम्म ल्याएर छाडिदिए ।
यसरी छ्यापियो पवित्रामाथि एसिड
रातको आठ बज्न लागेको थियो। कोठातिर जाँदा पवित्राले बाटोमा एक अपरिचित युवकलाई देखिन्। उनी भित्तातिर फर्केर उभिएका थिए। नदेखेझैं गरी पवित्रा अगाडि बढिन्। त्यत्तिकैमा त्यो मान्छेले उनीमाथि तेजाब छ्याप्यो। तेजाब छ्याप्ने थिए – आलमका आज्ञाकारी पात्र मोहम्मद मुन्ना ।
पवित्राले केही समयसम्म त आफूलाई के भएको हो भन्ने चाल नै पाइनन्। आत्तिएर कोठातिर दौडिइन् । उनले सायद आफुलाई छरिएको कुरा तेजाब हो भन्ने कुरा पनि पत्तो पाएकी थिइनन् होला, उनकी दिदी भन्छिन् । भेला भएका मान्छेहरूले प्रहरीलाई खबर गरे।
तेजाब आक्रमणपछि बारम्बार फोन
अनुहारको दाहिँने तर्फ र कपालमा तेजाब लागेकी पवित्रालाई कीर्तिपुर अस्पताल लगियो । अस्पताल जाने क्रममा पनि पवित्राको नम्बरमा आलमको फोन आयो । पवित्राको दिदीको साथमा थियो पवित्राको मोबाइल । त्यतिबेला पनि आलमले तिमी करिब ९ बजे तिर कति खेर घर पुग्यौँ ? म त मापसेमा परे भने । पवित्राको दिदीले यस्तो भयो त को होस् भन्दा होर ! म आउछु अस्पताल भनेका थिए । त्यसबिचमा पनि आलमले १० चोटी भन्दा बढी फोन गरेका थिए ।
केही समयदेखि पवित्रालाई आलमले पटक पटक फोन गर्थे । पवित्राको चियो चर्चो गने गर्थे । फोन बिजी भएमा कता व्यस्त के हो जस्ता प्रश्न गर्ने गरेको कुरा पवित्राले दिदीसंग भनेकी थिइन् । सोही बेला नै पवित्राले सामाजिक सञ्जालमा आलमलाई ब्लक गरेकी थिइन् ।
सुन्दर भविष्यको खोजीमा ओखलढुंगाबाट काठमाडौंसम्मको यात्रा
ओखलढुङ्गा घर भएकी पवित्रा करिब दुई वर्ष अगाडि काठमाडौँ आएकी थिइन् । “प्लस टु” लेभलको पडाई सकेर बसेकी उनी साँइली दिदी सुनिता थापासंग बस्न थालेकी करिब दुइ तिन महिना मात्र भएको थियो ।
पवित्राका बुवाआमा अहिले ओखलढुंगामा नै बस्छन् । सुन्दर भविष्य बनाउछु भन्ने सोचेर काठमाडौं हिँडेकी छोरीमाथि तेजाब छ्यापिएको सुनेर उनीहरू यतिबेला मर्माहत छन् । आमाबुवा काठमाडौं आउदै हुनुहुन्छ, सुनिताले भनिन् ।
‘मलाई मेरो बहिनी प्रति कुनै शंका छैन एउटा बाउको उमेरको मान्छेले मेरी कलिली बहिनीलाई कुन नजरले हेरेर यस्तो गर्छ भन्ने के थाहा । देशमा नियम कानुन छ तर तोडिएका छन्, मेरो बहिनीलाई जलन गराएर तडपाउनेलाई सरकारले कडा भन्दा कडा कार्बाही गरोस्, सुनिताले भनिन् ।
टिभि सिरियल ‘बिदाई’ की नायिका सारा खानलाई पनि देखियो कोरोना संक्रमण